qarax weyn oo laga maqlay marks dagaal oo ku-sugnaa somalia * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
June 27— Wararka ka imaanaya Xeebaha Puntland ayaa sheegaya in qarax weyn laga maqlay markab kuwa dagaalka ah oo ku sugnaa meel qiyaastii 44KM u jirta degmada Caluula ee Gobolka Bari.
Dad ku dhaqan deegaanka Murcanyo ayaa u sheegay Idaacada VOA inay arkeen markab weyn oo kuwa dagaalka ah oo qarxaya, kaddibna quusaya
Qaar ka mid ah Kaluumeysatada deegaanka ayaa sheegaya in qaraxa ay u maleynayaan inuu ka dhex dhacay markabka oo ahaa kuwa dagaalka.
Sidoo kale dadka deegaanka ayaa sheegaya inay arkaan labo markab oo kale oo kuwa dagaalka ah, kaasoo u soo gurmaday halkii uu markabka ku degay oo deegaanka Murcanyo u jirta illaa 4 mile.
Ma cadda waxa dhabta ah ee qaraxaas u ahaa, balse dadka deegaanka ayaa sheegaya in qaraxa uu ahaa mid aad u xooggan.
Maraakiib kuwa dagaalka oo ka socda dhowr dal ayaa ku sugan xeebaha Soomaaliya, kuwaasoo kula dagaalamaya burcad badadeedka.